China akwụkwọ factory imetosi ihe onwunwe squeezing igwe emepụta na suppliers | Igwe na-emepụta ihe
Igwe a nakweere ụkpụrụ nke akpịrị ịkpọ nkụ, nke bụ ihicha ihe nkiri plastik (ihe nkiri plastik, ihe nkiri ihe nkiri plastic mulch, PP kpara akpa, akpa akpụkpọ anụ, akpa ohere, akpa akpa, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ plastik) ngwa ngwa Ngwa maka ịpịpụta mmiri dị na plastik.
Igwe a nakweere ụkpụrụ nke akpịrị ịkpọ nkụ, nke bụ ihicha ihe nkiri plastik (ihe nkiri plastik, ihe nkiri ihe nkiri plastic mulch, PP kpara akpa, akpa akpụkpọ anụ, akpa ohere, akpa akpa, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ plastik) ngwa ngwa Ngwa maka ịpịpụta mmiri dị na plastik. Onwem na rotary ịghasa ngwaọrụ, pụrụ iche reducer, n'ụzọ zuru ezu akpaka akụrụngwa maka piakota na dewatering plastic film, plastic ugbo film mulch, eyi kpara akpa, agwọ akpụkpọ akpa, ohere akpa, ton akpa, mkpa plastic mpempe akwụkwọ n'efu plastic, wdg. Igwe a na - agbaso ụkpụrụ nke akpịrị ịkpọ nkụ na - agbakwunye ya ma jiri ya mee ihe na - emegharị ihe na - emepụta. Squeemepụta na mmiri akpịrị ịkpọ nkụ bụ ngwa ngwa ma mmetụta dị mma. Igwe a dị mfe iji rụọ ọrụ, ịpịpịa na mmetụta akpịrị ịkpọ nkụ nwere ike iru karịa 95%, na mmepụta nwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ.